Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny SEO - Semalt Expert
Ny tetik'asa fanentanana Search Engine dia teknika marika nomerika izay ahafahan'ny mpampiasa mivezivezy amin'ny mpitsidika finday hitady karazana votoatin'ny tranonkala. SEO dia mampiditra ireo lafiny manan-danja amin'ny marketing sy ny dikan-tserasera momba ny marketing, izay manjary miantraika amin'ny fomba fiarahan'ireo tranonkala amin'ny mpanjifany. Amin'izany fomba izany, ny vohikala dia manjary mitarika ny laharam-pamokarana amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny karazam-pikarohana mitady ny laharana amin'ny SERP. SEO dia afaka manamboatra ny tranokalan-tserasera amin'ny sehatra fitadiavana amin'ny teny fikarohana manokana. Ireo orinasa mahomby dia manana SEO tranonkala maro ho an'ny tranonkala - budget vps. Lisa Mitchell, Semalt Mpitarika Success Manager, mino fa ny sasany amin'ireo zavatra tsara indrindra tokony ho fantatra dia ahitana:
1. Mamoròna votoaty tsara. Ny manan-danja eo amin'ny sehatra dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra mahatonga ny tranonkala ho tsara amin'ny milina fikarohana. Vokatr'izany, tokony hanoratra votoaty izay manan-danja ary manam-pahefana ianao ao amin'ny lohanao. Azonao atao ny mamorona anao ireo algorithm amin'ny alàlan'ny fikarohana azonao amin'ny SERP amin'ny teny fanalahidy hita ao amin'ny votoatinao.
2. Ny UX dia manan-danja. Ny fampisehoana ny pejy dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampifangaroana ny tranonkala. Ny mpampiasa dia miezaka ny hanana fotoana be dia be ao amin'ny tranonkala izay tsara lavitra noho ny iray izay tsy mahafinaritra. Ny UX dia iray amin'ireo fotodrafitr'asa izay afaka mametraka ny tranokalanao voalohany amin'ny pejy Google Search. Tokony handini-tena ny fametrahana famatsiam-bola tsara amin'ny famolavolana ny tranokalanao.
3. Zava-dehibe ny famerimberenana. Ny ampahany amin'ny sehatra SEO hafa toy ny teny fikarohana, dia zava-dehibe ny mamorona rindran-dalana mahazatra ho an'ny fampiharana ao amin'ny tranokalanao sy zavatra hafa. Ny backlinks manondro ny tranonkalanao dia mampitombo ny fahefan'ny faritra misy anao ka mahatonga azy hijoro amin'ny valin'ny fikarohana..Afaka mahazo tombony avy amin'ny fifamoivoizana ianao, izay azo avy amin'ny sehatra SEO mahasoa, toy ny fametrahana hafatra ary fanomezana ho an'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra.
4. Ny Power of Analytics. Ny fitaovana sasantsasany izay manolotra sehatra fitadiavam-bola dia mety ho manan-danja amin'ny web ho an'ny SEO. Azonao atao, ohatra, ny manara-maso sy manara-maso ny fivoaran'ny SEO SEO mampiasa ireo fitaovana ireo. Azonao atao ihany koa ny manitsy ny fanovana ilaina amin'ny fomba fiasan'ny fitaovana ao amin'ny tranonkalanao. Mety ho mora amin'ny mpifaninana lehibe ny manjakazaka ao amin'ny lohanao. Azonao atao ny mandray soa maro izay mahatonga ny tranokalanao ho lehibe amin'ny seho SEO.
5. Sosialy momba ny varotra ara-tsosialy. Ny iray amin'ireo fomba fijery ny fampahalalam-baovao dia amin'ny fizarana. Ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy dia manome ny fidiram-bolany amin'ny fizarana votoaty viraliny Ireo mpampiasa dia afaka mandefa rohy amin'ny tranokalanao any amin'ireo tambajotra misy mpandray anjara.
6. Ny sehatry ny votoaty dia ampahany amin'ny SEO ihany koa. Ny famokarana votoaty dia teknika manan-danja izay tokony hampiasaina amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo. Ohatra, azo atao ny manao fanentanana ara-barotra mahomby rehefa mamorona votoaty ho an'ny tranonkalanao. Indrisy anefa fa ny antsasaky ny fizotry ny SEO manontolo no resahina.
7. Avoaho ny sazin'ny Google. Black hat SEO dia afaka mandoa sazy henjana ho an'ny tranonkalanao. Halaviro ny paikady tsy ara-dalàna toy ny teny filamatra mametaka ary mampihatra SEO ratsy ho an'ny mpifaninana aminao. Ity dingana ity dia afaka manatsara ny fomba fifandraisan'ny olona amin'ny tranokalanao.